Boom azo havaozina any Arzantina | Green Renewable
2 taona mahery kely lasa izay, manokana ny 15 Oktobra 2015, dia nosokafana ny fandrarana ny angovo azo havaozina any Arzantina.
Tamin'io andro io, lalàna 27.191 navoaka tao amin'ny Gazety Ofisialy, izany fanao izany dia ny kilalaon'afo izay nandrehitra ny fiangonan'ny fitomboana mahavariana azo havaozina any amin'ny firenena atsimo.
Ity lalàna ity dia namela ny fahatongavan'ireo fampiasam-bola avy 7000 tapitrisa dolara ary orinasa vaovao an-jatony hametraka sy hitantana zavamaniry photovoltaic, toeram-pambolena rivotra, zavamaniry biomassa ary biogas ary zavamaniry mini-hydroelectric.
1 Fandaharana RenovAr
4 Angovo hafa
Raha manazava ao amin'ny lahatsoratra hafa, ity dia taona tsara ho an'ny fampiroboroboana ireo havaozina. Raha ny marina, ireo tetikasa nosoniavina tao anatin'ny 12 volana lasa dia hanomboka hatsangana, miampy 26 izay efa an-dalam-panamboarana, mifanaraka amin'ny Fandaharana RenovAr, natolotry ny Governemanta.
Raha mbola mitohy amin'izany i Arzantina, dia hahatratra ny tanjona amin'ny fandrakofana ny 20% -n'ny matrix angovo misy angovo azo havaozina hatramin'ny 2025, androany dia tsy nahatratra 2% ilay isa, fa amin'ny zavamaniry vaovao eo am-panamboarana dia hamela hahatratra 8% amin'ity taona ity ary 12% amin'ny taona 2019.
Raha ny filazan'ny tompon'andraikitra maro: «Mahatalanjona izany mitranga any Arzantina, ny firenena dia mijoro eo amin'izao tontolo izao ho iray amin'ireo tsena manintona indrindra amin'ny fampandrosoana ny angovo azo havaozina ”.
Juan Bosch, filohan'ny Saesa, mpivarotra lasantsy sy angovo, dia manamafy fa i Arzantina dia nihatsara be dia be. “Raha mandinika ny roa taona fotsiny ianao dia ho hitanao fa nilalao ligy hafa ny firenena tamin'ny raharaha azo havaozina, dia 1/2% fotsiny ny angovo azo havaozina tao amin'ny matrix angovo. Androany dia tsy misy kaongresy azo havaozina eto amin'izao tontolo izao izay tsy resahina i Arzantina ho toerana fampidiram-bola ».
Ireo famatsiam-bola ireo dia avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao. Ireo dia hanampy an'i Arzantina mitombo amin'ny tontolo havaozinaRaha eto dia misy fahaiza-manao 678 MW, Uruguay kosa dia manana 1720 MW (44% amin'ny matrix angovo misy azy); Shily, 3740 MW (17%), ary Brezila, 28.310 MW (18%).
Amin'izao fotoana izao dia 678 MW fotsiny ny angovo azo havaozina no mamahana ny matrikan'ny angovo Arzantina, raha mihaona amin'ilay tanjona kendrena 20% napetraka tamin'ny 2025 dia hidika mahatratra 10.000 MW. Mba hahatratrarana izany dia natolotry ny governemanta ny RenovAr Program, fanomezana lehibe iray izay zaraina ho an'ny orinasa samihafa.
Hatramin'izao, ny iray izay nanaparitaka be indrindra dia ny Fandaharana RenovAr, izay efa nahavita fihodinana telo (fihodinana 1 tamin'ny Aogositra 2016; fihodinana 1,5 tamin'ny Novambra 2016, ary fihodinana 2 tamin'ny Oktobra 2017). Kind dia mamaritra fa efa misy 4466,5 MW nomen'ity rafitra ity, mifanaraka amin'ny tetikasa 147 (59 amin'ny fihodinana 1 sy 1,5 ary 88 amin'ny fihodinana 2). "Amin'izany dia tsy maintsy ampiana tetikasa 10 hafa misy ny vahaolana 202".
Ny fampiasam-bola ilaina dia tena zava-dehibe ary miankina amin'ny karazana teknolojia voafantina: ohatra, ny fametrahana herin'ny MW amin'ny angovo azo avy amin'ny masoandro, tsy maintsy mandroaka 850000 1.2 $ eo ho eo, raha ho an'ny herin-drivotra MW dia $ XNUMX tapitrisa no ilaina.
Raha eo amin'ny lafiny enti-manana dia tsy manana fitsiriritana firenena hafa ny firenena. Betsaka ny rivotra (sy ny tanjaka tsara) any Patagonia; masoandro be any Avaratra (na dia any Córdoba aza), ary misy loharano maro ny biogas sy biomass amin'ny faritry ny fambolena. Misy ihany koa ny mety amin'ny zavamaniry mini-hydroelectric.
Ny angovo azo havaozina dia mora vidy kokoa noho ny angovo nentim-paharazana: iray amin'ireo tetikasa RenovAr mora indrindra nikatona tamin'ny US $ 45 isaky ny MW / ora, raha androany mividy avy any Camessa ilay mpampiasa be amin'ny US $ 70/80 MW / h. Ho an'ny mpanjifa ara-dalàna dia tena zava-dehibe izany satria ny MW / ora tsirairay avy amin'ny angovo azo havaozina dia mampihena ny faktioran-jiro.
Ny governemanta dia te-hamorona fifangaroan'ny herinaratra teknolojia samihafa (rivotra, masoandro, biogas, biomassa ary mini-hydro), fa ny lehibe indrindra dia ny herin'ny rivotra, izay efa misy fifanarahana nomena ho 2.5 GW.
Aorian'ny angovo avy amin'ny rivotra, ny masoandro avy eo no zava-dehibe, miaraka amin'ny tetikasa nomena loka tamin'ny 1732 MW. Amin'izao fotoana izao, ity teknolojia ity dia tsy manana firoboroboana firy ao amin'ny firenena. Tsy misy afa-tsy 7 MW ao San Juan, izay tsy maintsy ampiana zavamaniry fanandramana 1,5 MW ao amin'io faritany io ihany koa.
Amin'ity tranga ity, 360 Energy dia, amin'ny lafiny mari-pankasitrahana, orinasa angovo tsy miankina amin'ny masoandro lehibe indrindra eto amin'ny firenena. Ny CEO, Alejandro Lew, dia nanipika fa, anisan'ny vaovao revolisiona azo havaozina, ity orinasa ity dia nanao sonia fifanarahana maromaro araky ny fitsipiky ny RenoVar 1,5 Round (fifanarahana fito, ho an'ny 165 MW, any San Juan, Catamarca ary La Rioja, izay ny fifanarahana voalohany dia hanomboka amin'ny volana martsa) ary amin'ny fihodinana 2 (fifanarahana ho an'ny 147 MW izay hiasa amin'ny taona 2019 sy 2020, any Catamarca, San Juan, La Rioja ary Córdoba "Raha atambatra, 300 tapitrisa dolara no hampiasantsika".
Lew dia nanindry fa i Arzantina dia mety ho herin'ny masoandro. Indrindra amin'ny avaratra andrefan'ny firenena, fa koa amin'ny toerana izay mety toa izany tsy dia mandaitra, toa ny faritanin'i Buenos Aires (izay tsara kokoa noho ny faritra sasany any Eropa). "Ny fandrosoana vinavina amin'ny angovo avy amin'ny masoandro dia manondro fa ny matrix angovo ao an-toerana iray manontolo dia azo omena an'io loharano io."
Somary lasa lavitra any aoriana, fa miaraka amin'ny fampiasam-bola sy tetikasa, dia tonga ny biogas sy biomass. Hatreto dia 65 MW sy 158 MW no nomena, isaky ny tranga. Androany, ny zavamaniry biogas ao amin'ny firenena dia isaina amin'ny rantsan-tànana (zara raha misy 10 MW), saingy tombanana ho afaka 24 volana eo ho eo.
Ny SeedsEnergy, ohatra, dia nanambara fampiasam-bola mitentina 11 tapitrisa dolara amerikana hananganana orinasa biogas any Venado Tuerto (2 MW) sy US $ 13 tapitrisa hananganana iray hafa any Pergamino (2,4 MW). «Ity dia ho amin'ny tranga voalohany satria mieritreritra isika manitatra fahaiza-manao. Raha misy RenovAr 3 dia handinika ny fampisehoana ny tenanay izahay satria te-hanangana zavamaniry bebe kokoa ary hamerina hanangona vola ».
Ny revolisiona maitso tratra tao anatin'izay 2 taona lasa izay dia mahavariana, ary nametraka ny firenena ho hitan'ny mpampiasa vola eran-tany, tonga izy ireo fampiasam-bola an-tapitrisany dolara, vita sonia ny fifanarahana, valan-javaboary am-polony maro no miorina ary miteraka asa. Mbola lavitra ny lalana ho an'i Argentina mba ho herin'ny angovo madio, fa ny vato voalohany kosa dia efa napetraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Boom azo havaozina any Arzantina
Ireo sendika dia mitazona ny fahavononany amin'ny angovo arintany amin'ny ho avy